Ukupheka Franchise - Izitolo Zokudla Okuthengiswayo | Franchiseek
»Amathuba weFranchise»i-United Kingdom»Ukupheka Franchise
Okufakiwe Kokwetha Franchise
I-Catering Franchise yakamuva
Hot Inja Academy
Hot Inja Academy. Njengomuntu ongaphansi kwe-Asia Franchise Academy, i-Hot Dog Academy ngomphumela wokuqina ...
Isungulwe ngonyaka ka-2008, i-Oakleys Grill & Pizzeria yindawo yokudlela yokubaleka yomndeni eyaqala yavula iminyango yayo edolobheni lase Yorkshire Dales ...
Hlanza ukuthanda kwakho ukudla nge-franchise yokudlela. Kwabaningi, ukudla okuhle okuseqophelweni eliphezulu kuluhlu lwabo uma kukhulunywa ngendlela yokuphila enenjabulo.
Ukudla neziphuzo kungumkhakha omkhulu we-franchising. Kuyohlala kunesidingo sokudla, ngisho nangokwengeziwe njengoba inani lamaplanethi likhula ngesilinganiso sokuqhuma.
Iziphi izinhlobo zamaphaneli wokudla atholakalayo?
Uma kukhulunywa ngama-franchise wokudla, akuyona nje izindawo zokudlela ezifana neMcDonald's neDominos, kunezinhlobonhlobo ezahlukahlukene zama-franchise asezingeni lokudla neziphuzo.
Izindawo zokudlela zamahhotela - wonke umuntu uthanda isidlo esihle endaweni yokudlela yasendaweni, ngokudla okuhle kwekhwalithi futhi uphuze amakhasimende athande. Ukuhlinzeka amakhasimende ngeneliseko ephezulu yamakhasimende e-notch, amakhasimende azoqhubeka nokuvakashela indawo yakho yokudlela njengoba izinzuzo zakho ze-franchise zivela ebhizinisini eliphindaphindwayo.
I-takeaway franchise - Sonke sibhekana nezikhathi lapho singazizwa ngathi sithanda ukupheka futhi kungezikhathi ezinjengale lapho lapho sizokhetha khona ukuthatha uhambo. Njengoba sinama-franchise amaningi ahlukanisayo wokukhetha kusuka kuma-franchise ase-India asusa e-Chinese nase-Pizza, kungani ungasebenzisi leli thuba kulo mkhakha elifanela ukunambitheka kwawo wonke umuntu.
Ama-franchise weselula wokudla -Kukhona uhla olukhulu lwezinhlobo ezihlukile zama-franchise wokudla weselula, ovela emcimbini / wokupheka ohlanganisa ukudla, ukubhukuda kwe-hog, izinsizakalo zokulethwa kokudla okusha kanye nomshini wokuthengisa ama-vending.
Enye yezinzuzo zokudla kanye nesiphuzo i-franchise ukuthi uzenzele ibhizinisi lakho, kepha hhayi wena.
Lapho utshala imali kuma-franchise wokudla, kungaba yindawo yokudlela noma i-franchise ethengwayo, i-franchisor imvamisa ukukunikeza konke okudingayo ukushaya phansi komhlaba kugijima. Lokhu kuvame ukufakwa kutshalomali lwama-franchise futhi kufaka nezimpawu zezimoto / zokudlela kanye ne-livery, iyunifomu yabasebenzi, izinhlelo ze-EPOS, isoftware nokusizwa ekukhetheni isiza. Amasethingi okwethulwa kanye nemishini enikeziwe kuyahlukahluka kusuka kufranchise kuya kufranchise ngakho-ke qiniseka ukubheka ukuthi lokhu kuchaziwe kumadokhumenti we-Franchise ngaphambi kokuthenga.